भक्तपुरमा साँच्चै धान रोप्ने किसानदेखि हिलो खेल्नेको जात्रा, हेर्नुस् १५ फोटो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भक्तपुरमा साँच्चै धान रोप्ने किसानदेखि हिलो खेल्नेको जात्रा, हेर्नुस् १५ फोटो
डिसी नेपाल , १५ अषाढ २०७५
काठमाडौँ। आज असार १५ अर्थात धान दिवस। देशभर धान रोपी दही चिउरा खादैं यस दिवसलाई मनाईदैछ। आजको दिन खेतमा धान रोप्नुका साथै हिलो खेली रमाइलो गर्ने चलन बढ्दै गएको छ। धान दिवसकै अवसरमा विभिन्न स्थानमा धान रोप्ने कार्यक्रमको आयोजना नै गरिएको छ। जहाँ राजनीतिक नेताहरुले समेत सहभागिता जनाएका छन्।
यस्तै दृश्य भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा पनि देखियो। नेपाल किसान संघ जिल्ला कार्यसमिति, भक्तपुर परिवारले आयोजना गरेको धान दिवस कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागि भएका थिए।
उनी धान रोप्नै भनेर चप्पल लगाएर त्यहाँ सम्म पुगेका थिए। तर हिलाम्मे खेतमा उनी धेरै बसेनन्। उनी धान रोपेर बाहिर निस्कि हाले। उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुको एक समूह पनि सहभागि थियो।
तर उनीहरु धान रोप्न होइन हिलोमा रमाउन आएका थिए। हिलो खेल्न भनेरै तयारीका साथ आएका उनीहरु कतिले अनुहारमै हिलो दलि दिए भने कतिलाई हिलाम्मे खेतमा बोकेर फालिदिए। एकातर्फ महिलाहरुको एक समूह धान रोप्न व्यस्थ देखिन्थे भने अर्कातर्फ ती विद्यार्थीहरु हिलो छ्याप्दै रमाइरहेका थिए।